Trump oo sheegay inuusan cod ka duubin madixii hore ee FBI-da - BBC News Somali
Trump oo sheegay inuusan cod ka duubin madixii hore ee FBI-da
22 Juunyo 2017
Image caption Madaxweyne Trump iyo Comey
Madaxweyne Donald Trump ayaa beeniyey inuu duubay wadahadalladii dhexmaray isaga iyo agaasimihii hore ee FBI-da ee uu shaqada ka eryey, inkastoo uu mar sii horreysay bidhaamiyay inuu cod ka hayo James Comey.
ka dib cadaadis socday bilooyin oo looga dalbanayay inuu shcaaiyo cajallada uu ka duubay James Comey markii ay kulmeen, ayaa Trump fariin u baraha bulshada ee Twitterka uu ku baahiyay wuxuu ku sheegay inuusan ogeyn in duubitaan caynkaasi ah uu jiro, wuxuuna intaasi ku daray in aanu isagu waxba duubin.
Trump ayaa dhowr maalmood ka dib markii uu xilka ka qaaday agaasimihii hore ee FBI-da waxa uu bidhaamiyay in laga yaabo in wadahalladii dhexmaray labadooda la duubay.
Arrintaasi ayaa horseeday eedeymo iyo tuhun ah in Mr Comey xilka looga qaaday si loo cuuryaamiyo baaritaanka ay FBI-du ku waday faragelinta la sheegay inuu Ruushku ku sameeyay hanaanka doorashada Mareykanka ee sanadkii hore iyo suurtagalnimada inay wadasahqeyn lahaayeen kooxdii ololaha Trump iyo Moscow.
Hadalkaasi Trump ka soo yeeray ayaa horseeday alkumidda guddi gaar ah oo la wareegay baaritaannada faragelinta Ruushka.
Trump oo muran hor leh goradda la galay
James Comey: Trump wuu iga been sheegay
Trump oo shaqada ka tiray madixii hay'adda FBI